Senmagajet - チャモロ語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: senmagajet (チャモロ語 - ビルマ語)
SENMAGAJET si Yuus na mauleg para Israel, ni ayo sija y mangasgas na corason.
အကယ်စင်စစ် ဘုရားသခင်သည် နှလုံးသန့်ရှင်း သော သူတည်းဟူသော ဣသရေလအမျိုး၌ ကျေးဇူးကြီး တော်မူ၏။
Senmagajet na taebale y junagasgas y corasonjo: yan jufagase y canaejo gui guinasgas.
အကယ်စင်စစ် ငါ့နှလုံးကို ငါသန့်ရှင်းစေသော် လည်း အကျိုးမရှိ။ အပြစ်ကင်းခြင်းနှင့် ငါ့လက်ကို ဆေးကြောသော်လည်း အကျိုးမရှိ။
Ayo sija na taotao, anae jalie y señat ni jafatinas si Jesus, ilegñija: Este senmagajet na güiya y profeta ni para umamaela gui tano.
ထိုသို့ယေရှုပြတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာကို ထိုလူများတို့သည်မြင်လျှင်၊ ဤသူကား ဤလောကသို့ ကြွလာရသော ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်ဟု ဆိုကြ၏။
Sa este nae umatayuyut jao y mandeboto todos gui tiempo anae mojon siña ujasoda: senmagajet anae machuchuda inetnon y janom, ti ufato guiya güiya.
Anae unnatunas y taotao nu y linalatde, pot y tinaelaye, ninalachae y bonituña taegüije y puliya: senmagajet na todo y taotao taebale.
ကိုယ်တော်သည် လူတို့အပြစ်ကြောင့် ဆုံးမ၍ ဒဏ်ခတ်တော်မူလျှင်၊ ပိုးရွဖျက်တတ်သကဲ့သို့၊ လူတို့၏ တင့်တယ်ခြင်းအသရေကို ပြယ်ပျောက်စေတော်မူ၏။ အကယ်စင်စစ်လူခပ်သိမ်းတို့သည် အနတ္တသက်သက် ဖြစ်ကြပါ၏။
Senmagajet na calang anineng jumajanao todo y taotao: senmagajet na taesetbe y atborotoñija: Sa manrecocoje y güinaja ya ti jatungo jaye y chinile.
အကယ်စင်စစ်လူသည် အရိပ်၌သာ ကျင်လည် ပါ၏။ အကယ်စင်စစ် လူသည် အရိပ်၌သာ ကျင်လည် ပါ၏။ အကယ်စင်စစ် လူတို့သည် အကျိုးမဲပင်ပန်းကြ ပါ၏။ ဥစ္စာကိုဆည်းဖူးသော်လည်း အဘယ်သူရအံ့သည် ကို မသိရပါ။
Si Jesus jalie mamaela para iya güiya, si Nataniel, ya ilegña nu güiya: Estagüe senmagajet iyon Israel, na taya finababa guiya güiya.
နာသနေလလာသည်ကို ယေရှုသည် မြင်တော်မူလျှင်၊ လှည့်စားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သော ဣသရေလလူစစ်ကိုကြည့်လော့ဟု ထိုသူကိုအမှတ်ပြု၍ မိန့်တော်မူ၏။
depositarias (スペイン語>英語)water (英語>カンナダ語)meaning of bhokhlana (英語>ヒンズー語)os ydym (ウェールズ語>英語)content service (英語>ラトビア語)ketua pelajar (マレー語>英語)基準 (日本語>ルーマニア語)mochil (スペイン語>英語)pe'a (アゼルバイジャン語>英語)tarjama de arabeaespanyol (スペイン語>アラビア語)ruzie (オランダ語>エスペラント語)last sunday (英語>ヒンズー語)drawing board (英語>ギリシア語)बिएफ एकस एकस विडीओ (ヒンズー語>英語)somnia (ラテン語>イタリア語)eyebrow raising (英語>イタリア語)sahibidir (トルコ語>英語)reanimating (英語>イタリア語)ins (ポーランド語>トルコ語)بالكاملِ (アラビア語>タイ語)nakasabay ko si roger (タガログ語>英語)animal sound (英語>タミル語)millions (スウェーデン語>英語)solament (カタロニア語>マルタ語)אפור (ヘブライ語>デンマーク語)